Beckham: Qatar Waxay I Siinaysaa 150£ M. Ballana Qaadeen In Calanka Luudiga Laga Lulo Doha – Heemaal News Network
David Beckham ayaa bisha soo socota qalinka ku duugi doona heshiis qaali ah oo ku noqonaya wajiga Koobka Adduunka ee Qatar ka dhacaya sannadka danbe, isagoo qaadanaya 150 milyan ginni oo u dhiganta in ka badan 200 milyan doolar.
Kabtankii hore ee England oo 46 sanno jir ah laguna naaneeso Goldenballs, ayaa saxiixay heshiis ku kacaya 15 milyan ginni ama 20 milyan doolar sannadkii tobanka sano ee soo socda si uu u noqdo ambasadoorka Qatar ku matalaya masraxyada caalamiga ah.
Horaantii bishan waxa uu u duulay caasimadda Doha isagoo muddo todobaad ah dalxiis u joogay islamarkaana lagu soo wareejiyay garoomada Koobka Adduunka lagu qabanayo sannadka soo socda.
Ujeedada ay Qatar ka leedahay inay isticmaasho wajiga Beckham ayaa ah inay uga hortagto weerarka uga imaanaya warbaahinta Ingariiska kuwaasoo had iyo jeer ka baahiya weerar lidi ku ah dolwada Qatar tan iyo markii ay ku guuleysatay martigelinta Koobka Adduunka.
Warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan wargeysyada Ingariiska ayaa had iyo jeer ku dhaleeceeya Qatar inay laaluush ku bixisay martigelinta Koobka Adduunka, iyagoo sidoo kale soo hadal qaada xaalada xuquuqul insaanka ee shaqaalaha ka shaqeeya dalka yar ee Carbeed.
Madaama Beckham laga jecel yahay Ingariiska, waxay muuqaalkiisa u adeegsan doonaan inuu suuqgeyn u sameeyo tobanka sannadood ee soo socota.
Beckham ayaa durbaba u sheegay warbaahinta reer Galbeedka in dowlada Qatar ay balanqaaday inay ilaalin doonto amaanka iyo badqabka taageerayaasha ciyaaraha Koobka Adduunka, islamarkaana ay fasixi doonaan in calanka qoomu luudyada laga dhex lulo garoomada.
Qatar waa ka mamnuuc qoomu luudnimada laakiin waxay sameeyeen sharci baadil ah oo fasaxa dadka ceynkaas ah inta uu socdo Koobka Adduunka.
Dowlada Qatar ayaa sidoo kale u sheegtay David Beckham inay kordhin doonto dumarka ku jira dowlada.
Beckham ayaa suuq geyn u sameyn doona Qatar isagoo kala shaqeyn doona dhanka dalxiiska iyo dhaqanka.
Shaakir Oo Loo Qabtay In Uu Labbo Saacadood “12:00” Kaga Baxao Guriceel